स्टार कलाकारहरुको गीतलाई पछि पार्दै शिशिर भण्डारीको गीत ड्रेण्डिङको नँ २ मा आयो(भिडियो हेर्नुस) - E ALL NEPAL
स्टार कलाकारहरुको गीतलाई पछि पार्दै शिशिर भण्डारीको गीत ड्रेण्डिङको नँ २ मा आयो(भिडियो हेर्नुस)
चर्चित कलाकार, सँचारकर्मी तथा समाजसेवी शिशिर भण्डारीको नया गीत सार्बजनिक भएको छ। महँगो बजेटमा निर्माण गरिएको हाम्रो माया जिन्दाबाद बोलको यस गीतको प्रतिक्षा उनको फ्यान लगायत सबैले गरेको थियो। निकै आकर्षक बनेको यस गीतमा युट्युबर शिशिर भण्डारी संग टिकटककि क्विन जुम्ल्याहा दिदीबहिनी प्रिज्मा खतिवडा र प्रिन्सी खतिवडाको अभिनय देख्न सकिन्छ। हाम्रो माया जिन्दावादको अफिसियल भिडियो निकै बनेको छ।
अहिले सम्म अन्तर्वार्ता र टिकटकमा देखिएकी जुम्ल्याहा क्विन प्रिज्मा खतिवडा र प्रिन्सी खतिवडाको अब भने म्युजिक भिडियोमा समेत देखिएकी हुन्। उनीहरुको अभिनय ले भिडियो निकै उत्कृष्ट बनेको छ । शिशिरले आफ्नो जन्मदिन पारेर गीत सार्बजनिक गरेका हुन् । सानैदेखि गायन क्षेत्रमा पनि रुचि भएका शिशिर भण्डारीले यो गीत आफैले गाएक हुन् । यसपटक शिशिरले नयाँ नचाउने गीत लिएर आएका हुन्। शिशिरकै शव्द रहेको गीतमा राजनीति र माया मिश्रण गरी शव्द कोरिएको छ । यस गीतमा प्रिज्मा खतिवडा र प्रिन्सी खतिवडाको जोडी सहित दिपा दमंता को जोडी सहित एक जोडी जुम्ल्याहा युवकको जोडी समेत भिडियोमा देख्न सकिन्छ। सिशिर्ले यस गीतमा तीन जोडी जुम्ल्याहरुलाइ अभिनय गराएका छन् । गीतको अन्तमा प्रिज्मा र प्रिन्सीले पनि जुम्ल्याहा दाजु भाई संगै प्रेममा फसेको देखाइएको छ ।
प्रिज्मा खतिवडा र प्रिन्सी खतिवडाको अभिनय रहेको यस गीतमा शिशिर भण्डारीले निकै दमदार अभिनय गरेका छन्। करिब ४ लाखको आसपासमा खर्च भएको यस भिडियोमा सबै उत्कृस्ट प्राबिधिक रहेका छन् । कुनै ठुलो बजेटको फिल्म भन्दा राम्रो यो गीत बनेको छ। युटुबमा पनि गीतले तहल्का पिटिरहेको छ । सँगै रिलिज भएको अनमोल केसीको गीतलाई पनि पछार्दै युटुब ट्रेण्डिंगमा2नँमा हाल यो गीत छ । सोही दिन रिलिज भएो ए मेरो हजुर ३ र दाल भात तरकारीलाई पछि पार्दै शिशिर को गीतले २ नँ कव्जा गरेको हो । चाँडै नै शिशिरको गीत १ मा आउनेछ । भिडियो यस्तो बनेको छ। हेर्नुस तपाइहरु पनि-
बर्षा राउतलाई बच्चा नपाउने भए किन बिहे गरेको त भने पछी बर्षा राउत र आचल शर्मा झन्डै बेहोस [भिडियो हेर्नुहोस ]
बुटवलकी १७ बर्षे युवतीको यस्तो भिडियो युटुबमा आएपछि..हरेकको मोबाईल मोबाईलमा (भिडियो हेर्नुस)
नायिका दीपिका प्रर्साइ र निर्देशक दिवाकर भट्टराई विवाह बन्धनमा यसरि बाधिए [भिडियो…
म दोस्रो विवाह गर्दिन्,तिमीले जत्ती दुख दिए पनि, मैले तिमीलाई संतुष्ट पार्न सकिन होला…
७ बर्षे छोरीले “आमा पिसाब गर्ने ठाउँ दुख्यो”भनेपछि ! आमाले काम गर्ने घरमै…
आफ्नी आमालाई बृद्धाश्रममा राखेको भन्दै शिशिर भण्डारीलाई गालीको बर्षा ! तर वास्तविकता…